श्रीमानलाई निन्द्राको औषधी खानामा खुवाएर प्रेमीसँग गर्थिन यस्तो ह’र्कत, एक दिन भयो सबै हद पार ! – List Khabar
Home / समाचार / श्रीमानलाई निन्द्राको औषधी खानामा खुवाएर प्रेमीसँग गर्थिन यस्तो ह’र्कत, एक दिन भयो सबै हद पार !
काठमाडौ – एक श्रीमतीले आफ्ना प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानकै जीवन लिएकी छिन् । यो घ’टनाको रहस्य पुलिसले सुल्झाएको छ । घ’टनामा संलग्न पत्नी सिमर कौरलाई पक्राउ गरिएको छ ।
उनका प्रेमी अझै पनि फरार रहेको बताइएको छ । आज तकको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार घ’टना पंजाबको तरनतारन जिल्लाको पल्लासोर गाउँको हो ।
श्रीमानको जीवन लिएपछि सिमर प्रेमीसँग नै भागेकी थिइन् । सिमरलाई पक्राउ गरिएको भए पनि प्रेमी फरार नै छन् । जीवन जानेकी कान्छी छोरीका अनुसार गाउँकै एक युवक उनकी आमासँग दिनहुँ भिडियो कल गर्थे ।
उनको घरमा पनि आउने जाने गरिरहन्थे । आमाले साँझ खानामा निद्राको औषधी दिएर पितालाई सुताउँथिन् त्यपछि प्रेमीसँग फोनमा भिडियो कल गर्थिन् ।
साराले जुमसँग कुराकानीका क्रममा सानोमा आफ्नो परिवार छुट्टीका समयमा घुम्न गएको एउटा कथा सुनाएकी छिन्। भ्रमणका क्रममा सैफ अली खान, अमृता सिंह र इब्राहिमसँग उनी पसलमा केही लिन गएकी थिइन्।
बाबा आमा पसलभित्र छिरे तर उनी आफ्नै धुनमा थिइन्। उनी आफ्नै तरिकाले रमाइलो मान्दै सडकमा नाचिरहेकी थिइन्। मानिसहरूले उनलाई भिखारी सम्झेर भटाभट पैसा दिन थाले। साराले मानिसहरुले दिएको पैसा राखिन् र नाचलाई पनि जारी राखिन्।
Previous .त्यसपछि ३ जना किशोरले आफ्नै साथीलाई पालैपालै
Next के तपाईमा यस्ता संकेत छन् ? छन् भने तपाईं धेरै बुद्धिमानी र अरु के के?